स्वस्थ रहन घरपालुवा जनावर – Health Post Nepal
स्वस्थ रहन घरपालुवा जनावर
२०७५ भदौ ७ गते १३:३७
पहिले प्रायः गाउँघरमा भेटिने घरपालुवा जनावर अहिले सहरका घरहरूमा अभिन्न सदस्यका रूपमा देखिने गरेका छन् । घरको सुरक्षार्थ खटिने कुकुर होस् वा एक्युरियममा पालिएका विभिन्न रङ र प्रजातिका माछा हुन्, व्यस्त सहरिया जीवनमा मानिसका सुख–दुःखका अभिन्न मित्र बन्दै आएका छन् । कतिपयले त जनावरविनाको जीवन कल्पनै गर्न नसक्ने पनि बताउने गरेका छन् । घरपालुवा जनावरसँगको बढ्दो मोहले मानिसलाई निकै फाइदा पनि पु¥याएको छ । घरपालुवा जनावरसित समय बिताउँदा मानव स्वास्थ्यमा अनगिन्ती फाइदा पुग्ने अध्ययनले प्रमाणित गरेको छ । घरपालुवा जनावर (विशेषगरी कुकुर)ले मानव स्वास्थ्यमा पु¥याउने फाइदाबारे जानकारी :
१. घरपालुवा जनावरले मुटु स्वस्थ राख्छ सहयोग गर्छन् ।
घरपालुवा जनावरले अप्रत्यक्ष रूपमा मानव स्वास्थ्यमा फाइदा गरिरहेका हुन्छन् । जस्तै, कुकुरले हृदयरोग हुनबाट बचाउँँछ । कुकुरसँग हिँड्दा मुटुलाई फाइदा पुग्छ । बिहानको समयमा कुकुरसँग हिँड्दा सबैभन्दा बढी फाइदा गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । घरपालुवा जनावरसँग खेल्दा वा हिँड्दा समय बितेको थाहा हुँदैन, जसले मानव स्वास्थ्यमा धेरै फाइदा पु¥याउँछ । कुकुरको रक्तचाप एकदमै कम हुन्छ जसका कारण रक्तचाप बढाउन ऊ हिँडिरहन्छ । कुकुरसँगै हिँड्दा मानिसलाई पनि फाइदा पुगिरहेको हुन्छ । मुटुसम्बन्धी रोगमा घरपालुवा जनावरले निकै फाइदा पु¥याइरहेका हुन्छन् ।
२. घरपालुवा जनावरले साथी बनाउन सहयोग गर्छन् ।
कुकुर, बिरालो तथा खेतीमा लगाइने अन्य घरपालुवा जनावरलाई माया चाहिन्छ । उनीहरू मित्रता र मायाका अत्यन्त भोका हुन्छन् । उनीहरूले मानिसलाई छिटो मित्र बनाउँछन् । अर्को कुरा साथीहरूको लागि मुख्य स्रोत हुन् । घरपालुवा जनावर सानो–ठूलो नभनी मानिससँग संगत गर्छन् । घरमा पाहुना आउँदा पनि केही समयमै घुलमिल हुन सक्छन् । उनीहरूबाट हामीले मित्रताको महत्व बुझ्न सक्छौँ । मित्रता सन्तुष्टि र सन्तुष्टिले स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ ।
कुकुर महत्वपूर्ण घरपालुवा जनावर हो । आजकल बिहान–बेलुका कुकुर साथमा लिएर हिँड्ने चलन मौलाउँदो छ । प्रारम्भमा कुकुुर लिएर हिँड्न खासै रुचाइँदैनथ्यो । तर, आधुनिकतासँगै विशेषगरी सहरमा कुकुरप्रतिको मायामोह चुलिँदै छ । तपाईं कुनै दिन कुकुरलाई लिएर सहरको कुनै गल्ली वा पार्कमा जानुहुन्छ, त्यहाँ धेरै किसिमका मानिस भेट्नुहुन्छ । तपाईंको कुकुरलाई मनपराएर मानिसहरू बोलाउन, खेलाउन थाल्छन् । बिस्तारै उनीहरू तपाईंका साथी बन्छन् ।
३. घरपालुवा जनावरले खुुसी बढाउँछन् ।
तपाईं लामो कामको थकान बोकेर घर आउनुभएको छ भने पनि केही समय घरपालुवा जनावरसँग खेल्ने, जिस्कने गर्नुभयो भने थकानको महसुस कम हुन्छ । अनुसन्धानकर्ताको भनाइअनुसार कुकुरसँग खेल्दा चिन्ता र थकानबाट मुक्ति पाइन्छ । कुकुरसँग खेल्दा दिमागको सक्रियता बढ्छ, शान्ति र आनन्द प्राप्त हुन्छ । परिवारसँग बस्दा नपाएको आनन्द घरपालुवा जनावरसित पाइन्छ, खुसीको सीमा नै बढ्छ । वर्तमानमा जनावरहरू मानिसका पारिवारिक सदस्यझैँ बनेका छन् ।
घरपालुवा जनावरले मानिसलाई माया र बालबच्चाप्रतिको जिम्मेवारी सिकाउँछन् । जनावरको आनीबानीबाट मानिसले बालबच्चाको स्याहार गर्न सिक्छ । जनावरले मानिसलाई एकअर्काको भरोसा बन्न प्रेरित गर्छन्, शारीरिक अभ्यास गर्न सिकाउँछन् । बच्चाले जनावरबाट हाँस्न, रमाइलो गर्न तथा अन्य व्यवहार सिक्छन् । जनावरको आनीबानीबाट मजबुत र उदार बन्न राम्रो शिक्षा लिन सकिन्छ ।
४. घरपालुवा जनावरले स्वस्थ, तन्दुरुस्त बन्न सहयोग गर्छन् ।
घरमा भएका वेला जनावरले तपाईंलाई यताउता चल्न बाध्य पार्छन् । दैनिक जीवनमा तपाईंले जति नै समस्या झेले पनि त्यसले जनावरलाई खासै फरक पर्दैन । तसर्थ जुनसुकै अवस्थामा पनि तपाईंलाई खुसी राख्न जनावरले सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । जब तपाईं सबेरै उठेर कुकुरलाई यताउता घुमाउनुहुन्छ, बिहानको स्वस्थ हावा पाउनुहुन्छ । कुकुरले तपाईंलाई फुर्तिलो बनाउँछ । कुकुर मानिससँग खेल्न रुचाउँछ । तपाईं पनि कुकुरसित खेल्न र खाना खुवाउन दैनिक समय छुट्याउनुहुन्छ । यसले तपाईंको बानी–व्यवहारमा पनि परिवर्तन गराई फरक मानिस बनाउन सहयोग गर्छ । यसो गर्दा तपाईंको शरीरमा थाहै नपाई एकप्रकारको शारीरिक तन्दुरुस्ती प्राप्त भइरहेको हुन्छ, तपाईंलाई सधैँ दयावान् बन्न सहयोग गर्छ, तपाईंलाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ ।
५. घरपालुवा जनावरले चिन्ता र तनाव कम गर्छन् ।
जब तपाईं लामो समयसम्म चिन्तामा हुनुहुन्छ, घरमा खेलिरहेका जनावरलाई देख्दा तपाईंको मनमा एकप्रकारले छुट्टै खुसीको अनुभूति हुन्छ । तपाईंको मन केही क्षण भए पनि आनन्दित हुन्छ, चिन्ता कम भएर जान्छ । समस्या केही क्षण भए पनि हराउँछ । जनावरसितको निकटाताले तपाईंलाई तनावबाट टाढा लान्छ । घरमा एक्विरियमको माछालाई हेर्दा केही समय मन प्रफुल्लित हुन्छ । जब कुकुर, बिरालोलगायत जनावर जिस्कँदै, चल्दै आउँछन्, तनावको मात्रा क्रमशः घढ्दै जान्छ । श्रीमान्–श्रीमतीबीच तनाव हुँदा घरमा पालिएका जनावरहरूका कारण केही कम हुने गरेको अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ ।